လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့
1 လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 12th November 2009, 1:23 pm
ဘာမှတော့ မပြောတော့ဘူးနော် ကျနော် Screen Shoot ပြမယ်။
ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။
2 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 13th November 2009, 1:06 pm
အဲဗျာ...ဒီလောက်ကြီးဆိုတော့မကောင်းတော့ဘူး....ဆက်ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်ဗျာ.....ကျွန်တော်တို့ အချိန်ပြန်ပေးရအောင်....ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းအပ်တာနဲ့ စာမေးပွဲတွေနဲ့ ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားပုံရပါတယ်...
3 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 15th November 2009, 2:23 am
အခု ကတော့ အတက်ကာ ပြောသလို မန်ဘာတွေ လည်း ၀င်ပြီးတော့ ပြောလာကြပါပြီ .. ကိုယ့် တင်ပေးတဲ့ Upload ဖိုင်ထဲမှာ Read me ဆိုပြီးတော့ shortcut ကလေးနဲ့ ကိုယ့် ဖိုရမ် နာမည်ကလေးထည့်ပေးထားလိုက် ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်.. ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး .. အကိုတော့ နောက်ပိုင်း အကိုတင်ပေးတဲ့ ဖိုင်တိုင်းမှာ အဲဒါကလေး ထည့်ထည့် ပြီးတော့ ပေးထားတယ် .. ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့် အစီအစဉ်ကလေးတွေ လိုတယ်ထင်တယ်
Programming ပြိုင်ပွဲလိုပေါ့ .. အဲဒါကိုတော့ တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားကြတယ် အိုင်တီ ကဗျာကလေးတွေ ကလည်း တော်တော်လန်းတယ်
4 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 19th November 2009, 5:51 pm
kohtet wrote: အခု ကတော့ အတက်ကာ ပြောသလို မန်ဘာတွေ လည်း ၀င်ပြီးတော့ ပြောလာကြပါပြီ .. ကိုယ့် တင်ပေးတဲ့ Upload ဖိုင်ထဲမှာ Read me ဆိုပြီးတော့ shortcut ကလေးနဲ့ ကိုယ့် ဖိုရမ် နာမည်ကလေးထည့်ပေးထားလိုက် ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်.. ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး .. အကိုတော့ နောက်ပိုင်း အကိုတင်ပေးတဲ့ ဖိုင်တိုင်းမှာ အဲဒါကလေး ထည့်ထည့် ပြီးတော့ ပေးထားတယ် .. ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့် အစီအစဉ်ကလေးတွေ လိုတယ်ထင်တယ်
Read Me ဆိုတဲ့ ဖိုင်သဘောမျိုး ကျနော် လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တူတို့ဘဲ အဲဒီ့တုန်းကတော့ လူအတင်းခေါ်တယ် ဘာညာပြောကြပြီးတော့။ ဟင့် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ Service တစ်ခု ကျနော် စီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။
အဲဒီ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေတော့ ကို ဘီလူး & /-tt@Ck3r တို့ ကူညီဖို့ ပြင်ထားပေတော့။ ဟီး
Programming ပြိုင်ပွဲမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာတော့ ကျနော် တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး။
PS : ကို နေဇော် ပျောက်နေသလားလို့။ အတက်ကာ ရေ ဘာသတင်းကြားသေးလဲ။
5 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 29th November 2009, 10:01 am
ကဲ အားလုံးဘဲ ကြိုးစားလိုက်ကြတာ အရင်လကို မမှီပေမယ့် နည်းနည်းဘဲလိုပါတော့တယ်။
မနက်ဖြန်ဆို လကုန်ပြီဆိုတော့ အရင်လကို မှီအောင် လုပ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလား။ ပိုစ့်တွေတင်ကြရအောင်။
new topics ကတော့ ၁၅ ခု လိုပါသေးတယ်။
new post ကတော့ ၁၇၆ ခု လိုပါသေးတယ်။
new users ကတော့ မမှီတော့ဘူး။
6 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 4th December 2009, 2:18 pm
ကြိုးစားကြတာပေါ့ တူတူ အားလုံးကို အတူတူလက်တွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
7 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 4th December 2009, 4:51 pm
8 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့ on 23rd December 2009, 3:35 pm
٨††∂¢қєř wrote: ဒီနေ့ဖိုရမ်အရမ်းလေးသွားသလိုပဲ။ အရမ်းသိသာတယ်။
ning နဲ့ယှဉ်ဖွင့်တာ ning ကအရင်တက်လာတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ မနေ့တုန်းကပြင်လိုက်တဲ့ code ကြောင့် လား။ ဒါမှမဟုတ် ဘန်နာတွေကြောင့်လားမသိဘူး။
yap... လေးတာတော့ တော်တော်လေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် LogIn တစ်ခါဝင်ပြီးရင်တော့ မလေးတော့ဘူး။ အဆင်ပြေတယ်။
ငါ့အထင်တော့ Connection ကြောင့်နေမှာပါ။
မနေ့ကပြင်လိုက်တဲ့ Code ??? ဘာ Code တွေလည်း။ Code နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဟ။
ဘန်နာကြောင့်ဆိုလည်း လဲမယ်လေ။ ငါတော့ မဆွဲတတ်တော့ဘူး။ ဥာဏ်ကုန်ပြီ။ ဆွဲတတ်တဲ့သူရှာပြီးခိုင်းလိုက်တော့။
9 Re: လုပ်ကြပါဦး Admin တို့ Mod တို့